Shabakadda Amiirnuur – Page 7
Weeraradii ugu dmabeeyay.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa Magaalada Beledweyne ku dilay Gudoomiyihii waaxda Buundo weyn ee Magaaladaas. kadib howl gal u muuqday mid qorshaysan. Raggii dilka geystay ayaa la sheegay in ay baxsadeen waxaana dilkaanu uu dhacay Shalay gelinkii dambe. Dhanka kale weearo ayaa xalay ka dhacay dhufeysyo kala duwan oo Shisheeyaha […]
Amxarada iyo Ciidmada Federaalka iyo kuwa koofur galbeed oo la wareeraray.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa xalay weeraray qaarka mid ah Ciidamada Itoobiya ee Fariisinka ku leh Magaalada Berdaale ee Gobalka Baay, xilli askarta Itoobiya ee Soomaaliya joogta niyad jabsan yihiin qarkoodna colaad isu hayaan maadama dhinacyada ay ka soo kala jeedaan ku dagaalamayaan gudaha Dalkooda. Diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan […]
Dhegeyso Natwo lagu qabtay shabeelaha hoose oo ciwaankeedu yahay la dagaalama gaalada inta arlada fidmo laga waynayo.
Natwo ay ka ay qaybteen qaar ka mid ah Culumada Diinta Islaamka lagu qabtay Gobalka Shabeelaha hoose. Dad fara badan ayaa natwada ka faa’iideystay kuwuaasoo si wanagsan u dhuuxayay Muxaadooriynka Culumada. Natwada ciwaankeedu wuxuu ahaa “la dagaalama gaalada inta arlada fidmo laga waynayo”. Sheekh Cabdiraxmaan Firin oo ka mid ah […]
Xagee marayaaa dagaalka Itoobiya yaase casmara duqeeyay?
Ismaamulka Tigreega ayaa sheegatay Mas’uuliyaddda duqeyn xalay ka dhacday Magaalada Casmara ee Caasimadda Dalak Eretaria . Sadax gantaal ayaa ku dhacay wasaaradda warfaafinta iyo garoonka diyaarahada waxaanay sababaeen argagax iyo kala carar welow aanay Dowladda Eretaria si rasmi ah uga hadlin khasaaraha ka dhashay. Tigeegu waxay sheegeen in sababta ay […]
Dhegeyso isu soo bax lagu difaacayay Nabi Muxamad oo ka dhacay Aadan yabaal
qaybaha kala duwan ee Bulshada ku dhaqan Magaalada Aadan Yabaal ee Gobalka Shabelehaa dhexe ayaa isugu soo baxay gudaha Fagaare halkaa ku yaalla waxayna Muujiyeen sida ay uga xun yihiin Gefkii Dowladda Faransiisku u geysatay Nabi Muxamad (SCW). Odayaasha dhaqan ee Gobalka iyo kuwa degmada Abwaano, iyo waaliga Gobalka Shabeelaha […]
Qaraxyo waaweyn oo Itoobiya ka dhacay.
Laba qarax oo waaweyn ayaa ka dhacay Magaalooyinka caanka ah ee Ismaamulka Amxaarada xilli wadanka itoobiya ay ka socdaan dagaalo culus oo u dhaxeeya xukuumadda Talada haysa iyo Ismaamulka tigreega. Qaraxyada midkood waxa uu ka dhacay Magaalada Bahardar ee Xarunta Maamulka Amxaarada halka kan kalena uu ka dhacay Magaalada Magaalada […]
Weeraro ka kala dhacay gudaha soomaaliya iyo dhulka Kenya soomaaliya ka haysato.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa fuliyay weeraro ka dhan ah Ciidamada Maamulada Soomaalida ah ee shisheeyaha la shaeeya iyagoo sidoo kalena weerar ka fuliayya gudaha dhulka Soomaalyeed ee Kenya haysato. Halka askeri ayaa ku dhintay qarax ka dhacay Duleedka Baraawe kaasoo ka dhan ahaa Ciidamada Dowladda Federaalka ah. Geesta kale […]
Qarax Khasaare sababay oo Kismaayo ka dhacay iyo dagaal iyo dil Baardheere ka dhacay.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiinta ayaa Magaalada Kismaayo qarax kula beegsaday wasiirka ka tirsan Maamulka Jabbaland waxaana la sheegayaa in uu ka bad baaday laakiin qaraxa ayaa khasaare sababay. Ugu yaraan 3 ka mid ah ilaalida Waiirka Deegaanka iyo DalxiiskaCaydiid Suleymaan Xaashi ayaa goobta ku dhintay kuwaasoo saaka loo dhaqaaqay in la […]
Khasaaraha ka dhashay qarax duleedka Dhuuso marreeb ka dhacay oo kordhay.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax shalay Ciidamo Dowladda Federaalka ah ka lagula beegsaday duleedka Magaalada Dhuuso Marreeb ee Gobalka Galgaduud. Ugu yaraan sideed askeri oo qabo dhaawacyo kala duwan ayaa isbitaalada la seexiyay kuwaasoo qaarkood xaalkoodu culus yahay. Askartaan ayaa ku dhaawacmay qarax Xarakada Shabaabul Mujaahidiin u […]
ugu yaraan hal askeri ayaa ciidamada uganda uga dhintay duleedka Deegaanka Shalaan-bood ee Gobalka Shbeelaha hoose Gaari gaashmaanna waa looga gubay kadib qarax Halkaa ka dhacay. Qaraxa waxaa fulisay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo dagaal kula jirta Shisheeyaha Dalka kusoo duulay iyo Soomaalida la shaqeysa. Waxaa la aaminsan yahay in khasaaraha […]
« Previous 1 … 5 6 7 8 9 … 273 Next »